ဦးခင်ညွန့် လက်ထက်က ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး အသုံးချ နိုင်ငံရေး ဆူပူ အာရုံပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ခင်ညွန့် ပြု တ်ပြီး အောင်သောင်းနဲ့ တပည့် ဖြစ်သူ ရွှေမန်း လက်ထက် မှာ ပို ပြီး ကြီးထွားလာပါတယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဦးခင်ညွန့် လက်ထက်က ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး အသုံးချ နိုင်ငံရေး ဆူပူ အာရုံပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ခင်ညွန့် ပြု တ်ပြီး အောင်သောင်းနဲ့ တပည့် ဖြစ်သူ ရွှေမန်း လက်ထက် မှာ ပို ပြီး ကြီးထွားလာပါတယ်
ဦးခင်ညွန့် လက်ထက်က ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး အသုံးချ နိုင်ငံရေး ဆူပူ အာရုံပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ခင်ညွန့် ပြု တ်ပြီး အောင်သောင်းနဲ့ တပည့် ဖြစ်သူ ရွှေမန်း လက်ထက် မှာ ပို ပြီး ကြီးထွားလာပါတယ်
April 30, 2017 drkokogyi
ပြည်ထဲ ရေး ဟာ မဘသ နဲ့ မျိုးနှစ်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက် မှု တွေကို ဘာကြောင့် မတားဆီးရဲ တာလဲ ဆိုတာ အံ့သြစရာမဟုတ်တော့ ပါဘူး။ ဥိးကိုနီ လုပ်ကြံခံတဲ့ အမှု က သက်သေပါဘဲ၊ လက်ရှိ မြန်မာ ပြည်မှာ မူဆလင်
အသိုင်းအ၀င်းဟာ နိုင်ငံရေး ဓားစာခံ ဖြစ်နေတာ ကြာပါပြီ၊ ဒါတွေကလည်း ပြည်ထဲ ရေးနဲ့ မျိုးနှစ်တွေရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှု တခု ပါဘဲ ။ နောက်မဘသ ပေါ်လာတော့ ပိုဆိုးလာပါတယ်။ မဘသနဲ့ မျိုးနှစ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲကျောထောက်နောက်ခံထဲမှာ အဘတွေ အပြင် တရုတ်ကွန်မြူ နစ်ပါတီ ရဲ့ လက်ဝေခံတရုတ်ခရိုနီတွေ ပါဝင်နေတာကည်း မြန်မာပြည်၇ဲ့ လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး ပြသနာကို ပိုမို ကြီးထွားစေနေတာပါ။
ဘာကြောင့် မဘသနဲ့ မျိုးနစ်တွေက တရုတ်တွေကိုကြောက်ရသလဲဆိုတာ စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ စစ်ဘဘ တွေ ကြောင့် ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဦးခင်ညွန့် လက်ထက်က ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး အသုံးချ နိုင်ငံရေး ဆူပူ အာရုံပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ခင်ညွန့် ပြု တ်ပြီး အောင်သောင်းနဲ့ တပည့် ဖြစ်သူ
ရွှေမန်း လက်ထက် မှာ ပို ပြီး ကြီးထွားလာပါတယ်။ ရွှေမန်းကေ၇ှ့ ထွက် လူလုံးမပြ ဘဲ နောက်ကွယ် ကနေဘဲ ထောက် ပံ့ပါတယ်။ ရွှေမန်း ပြည်ထောင် စု လွတ် တော်နာယက လက်ထက် မျိုးစောင့် ဥပဒေ ပြဌာန်း ခဲ့ တာ ဟာ ရွှေမန်း ရဲ့ မဘသ ကို အားပေးထောက်ခံနေမှု တခု ပါဘဲ။ သို့ သော် ရွှေမန်း
က ကလိမ် ဥာဏ်ပြေးပါတယ်။ အမေရိကန် ခရီးစဉ် မှာ မဘသကို တိုက်ဖျက် မယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီစကားက အပေါ်ယံလောက်သာသိတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အားကျစရာပါ။ ဒါပေမယ့် အတွင်းကျကျ သိသူတွေကတော့ ရီကြပါတယ်။ မဘသ ထဲ က ခင်ညွန့် လူတွေနဲ့ သိန်းစိန်လူတွေကို ရည်ညွန်းပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်သောင်းနဲ့ သူ့ လူတွေကိုတော့ ချန်ထားမှာ ဆို တာ အတွင်းသိတွေက သိ ကြပါတယ်။
လက်ရှိ ဘာသာေ၇း ပြသနာ အစပျိုးတာ တွေ မှာ မဟန ရဲ့ သြဇာ မသက်ရောက်တာ ကလည်း အရမ်းကို စိုးရိမ်စရာအခြေအနေပါ။ မဘသတွေ သာဝန်ကို တော် လှန်ရေး လုပ်နေတာ ကလည်း ရွှေမန်းအုပ်စု ရဲ့ 
နောက်ကွယ်က ခိုင်းစေမှု ဖြစ်ပါတယ်သူရဦးအောင်ကိုရဲ့ မြန်မာ ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်တွေမှာ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံေ၇းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ
ဟာ သူရရွှေမန်း ထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်လာတာကိုရွှေမန်း မနာလိုဖြစ်နေတာ ကြာ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူရဦးအောင်ကို ကို အွန်းလိုင်းမှာတိုက်
ခိုက်နေတဲ့ အကောင့် တွေ ရဲ့ ဇစ်မြစ်တွေ ကို လိုက်လံ စူးစမ်း ကြည့် တဲ့ အခါ မှာ တော်တော် များများဟာ သူရရွှေမန်း page မှာ သူရရွှေမန်းကို
ထောက်ခံနေတဲ့ အကောင့် တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ နေရ တယ်။ တချို့အကောင့် တွေက တော့ မျိုးနှစ်နဲ့ မဘသ လက်ဝ ခံတွေ ရဲ့ အကောင့် တွေ ပါ၊
မဘသနဲ့ မျိုးချစ် အမည်ခံအဖွဲ့ အစည်းတွေ ရဲ့ သတင်းထောက်တွေကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာ တွေကို ဘာသာရေး ပြသနာ ရှာ တဲ့ 
လုပ်ဆောင် ချက် တွေ တော် တော်များများ မှာ တွေ့ နေရတယ်။ ပြည်ထဲရေး မသိ ချင် ယောင်ဆောင်နေပါတယ်။ ဥပဒေတွေကို မျက်ကွယ် ပြု နေပါတယ်။ မဘသဟာ မြန်မာ့ သံဃာ လောကမှာ မဟန ထက် ပါဝါ ပိုကြီးနေတာ ဟာလည်း မဟန ကို ပြု ပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပြီ ဆိုတာ
ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါတယ်။ မဘသ ကိုယ်တော်တချို့ဆိုယင် မူးယစ်ဆေးပြား သုံးစွဲ နေတဲ့ အဆင့်တောင် ရောက်နေပါပြီ ။ ၀ီဝီ ကတော့ ထိပ် ဆုံးက
← သာကေတမှာလူစုပြီး မကွေးဝန်ချုပ်ဟောင်း ခိုးထားတဲ့ ၇ ဘီလီယံကိစ္စလည်း နောက်ကြောင်းပြန်အရေးမယူတော့ပါဘူးတဲ့။ နောက်ထပ်တစ်နေရာလောက်ထပ်ဆူပြလိုက်ရင် ၇ ဘီလီယံလည်း ပြန်မပေးနဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားမလား?
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အခန်း ( ၇ ) တပ်မတော် ဆိုတဲ့ ထဲမှာတော့ – တပ်မတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်းအတွက် ကွက်ပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်လို့ ရေးမထားဘူး →
5 thoughts on “ဦးခင်ညွန့် လက်ထက်က ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေး အသုံးချ နိုင်ငံရေး ဆူပူ အာရုံပြောင်းမှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ခင်ညွန့် ပြု တ်ပြီး အောင်သောင်းနဲ့ တပည့် ဖြစ်သူ ရွှေမန်း လက်ထက် မှာ ပို ပြီး ကြီးထွားလာပါတယ်”
Ko Lucky added2new photos.
Yesterday at 2:23pm ·
သူရရွှေမန်း တရုတ်ပြည်ကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သွားတာ ဟာ မြန်မာ ပြည်အတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ တရုတ်ပြည်ရဲ့ ကွန်မြူ နစ်ပါတီ တည်ထောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ ရှယ် ရာ ထည့် ၀င်ထားတဲ့ တိုင်း
ပြည်က ခိုးထားတဲ့ ဒေါ်လာတွေ အတွက် ကို ပိုပြီး ဂရု တစိုက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ရွှေမန်းသား အောင်သက်မန်းဆိုယင် တလ
တကြိမ်လောက် တရုတ် ပြည်နဲ့ ဟောင်ကောင်ကို သွားပြီး အစည်းအဝေးတွေ တက် ရလေ့ ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာ စစ်တပ် မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ 
Sino Truck တွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ company မှာ ဆိုယင် သူရရွှေမန်းမိသားစုဟာ ဒေါ် လာ သန်း ရာချီ ရှယ် ရာ ထည့် ၀င် ထားရှိ ပါတယ်။ သူရရွှေမန်း ရဲ့ မိန်းမ ဟာ တရုတ်အမျိုးသမီး ဖြစ်တာ ကြောင့် မြန်မာ ပြည်မှာ ရှိတဲ့ တရုတ် ခရို နီတွေ ဟာ ရွှေမန်း မိသားစုနဲ့ ထဲထဲ ၀င်ဝင် ပတ် သက် ပါတယ်။ ရွှေမန်း ကလည်း သူအာဏာရှိ စဉ်ကတည်းက တပည့်တွေ နဲ့ နီးစပ်ရာ လူ
တွေ ကို စကားပြောဆိုတဲ့ နေရာမှာ တရုတ် ပြည်ကို အတုယူကြဖို့ ၊ တရုတ်တွေရဲ့ စီးပွားရေးကို လေးစားကြဖို့ အမြဲ ပြောဆိုပါတယ်။ တရုတ်ကို အဖေ
ခေါ် စေလို တဲ့ စိတ် ဓာတ်ကို အမြဲ ရိုက် သွင်းပေးတဲ့ သဘောပါဘဲ။ ရွှေမန်း သားအောင်သက်မန်းဆိုယ် တရုတ်ခရိုနီ ရွှေတောင် company အုပ်စု ပိုင်
ရှင် အိုက်ထွန်း၊ ရိုးမ ဘဏ် ပိုင်ရှင် ဦးသိမ်းဝေ တွေနဲ့ တရားမ၀င် ငွေကြေးခ၀ါချ ခြင်း၊ export – inport လုပ်ငန်းတွေမှာ ဒေါ်လာသန်းရာချီ အခွန်ရှောင်
နိုင်အောင် ကူညီပေးခြင်းတွေ အကြီးအကျယ် ဥပဒေ ဘောင်ကျော်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ခရို နီ အကျိုးစီးပွားအ
တွက် တိုင်းပြည်ကို ချနင်းခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
လက်၇ှိ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ပြသနာ ရှာနေတဲ့လက်ပတောင်း စီမံကိန်းက ကြေးနီရှာ ဖွေရေး company ၀မ်ပေါင်ဆိုတာ တရုတ် ကွန်မြူ နစ်ပါ
တီ ရဲ့ လက်နက် ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းကြီး နော်ရီကိုး ရဲ့ လုပ်ငန်းခွဲတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ company မှာ သန်းရွှေ မိသားစု နဲ့ ရွှေမန်းမိသားစု ရဲ့ 
အစုရှယ် ရာတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဦးပိုင်ရဲ့ ရှယ် ရာတွေလဲ ပါဝင်နေပါတယ်။ အတွင်းသိတွေရဲ့ ပြောဆို ချက်အရ သူရရွှေမန်း မိသားစု၇ဲ့ ရှယ်ရာ
ပါဝင်မှု ပမာဏ ဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ လောက်ရှိ နိုင်တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ နှစ်စဉ် ရှယ်ရာတွေက ရ၇ှိ တဲ့ အမြတ်ငွေတွေကို တရုတ် စီးပွားရေး
ဘဏ် မှာ ရှိ တဲ့ အောင်သက်မန်း ရဲ့ အကောင့် ထဲ ကို စီးဝင်ပါတယ်။ ဒီလို အမြတ်ငွေ ပမာဏ ကြီးမားတာကြောင့် ရွှေမန်းနဲ့ သန်းရွှေ မိသားစု ဟာ ဒီ
တရုတ်လက်နက်လုပ်ငန်းရဲ့ကြေးနီတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို ပြည်သူ့ မျက်နှာ မကြည့် ဘဲ ခွင့် ပြု ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူရရွှေမန်း တရုတ် တိတ်တ
ခိုး တရုတ် ခရီးစဉ် ကို မီဒီယာကြီး တချို့သိရဲ့ သားနဲ့ သတင်းမဖော်ပြ ကြတာဟာလည်း စဉ်းစားစရာပါ။
NLD ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ၀င် တွေကို သူရရွှေမန်းနဲ့ သားတွေ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ စည်းရုံးရေး ဆင်းတာ ဗဟိုကော်မတီ ၀င် တ၀က်ကျော် လောက် ကို စည်းရုံး အောင်မြင်
လျက်ရှိ တယ်လို့ NLD ပါတီက အတွင်း သိ တဦးက သတင်းပေးလာပါတယ်
Yesterday at 1:56pm ·
သူရရွှေမန်းက မြောက်ကိုရီးယားကိုသွားပြီး နူ ကလီးယားအတွက် စာချူ ပ်တွေ ချူ ပ်ဆို ခဲ့ တယ်။ နောက် မိုးကုတ် နားမှာ ယူရေနီ ယံ တွေ့ ရှိ တူးဖော်ပြီး ပြင်ဦးလွင်က သနလ ဌာ နတွေမှာ ဓတ်ခွဲ ဖို့ အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုစဉ်းစားတိုင်ပင်ဆွေးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ တော့ မိုးကုတ်-ပြင်ဦးလွင် ကားလမ်းကို ယူရေနီယံသယ်
ဆောင်ဖို့ ဖောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သူရရွှေမန်းရဲ့ သားကြီး အောင်သက်မန်း ရဲ့ ဧရာရွှေဝါ company က ညောင်ကုန်းရွာကနေ လုံခမ်ကျေးရွာအထိ တာ
၀န်ယူဖောက်လုပ်ခဲ့ ပြီး ကျန်တဲ့ လမ်းပိုင်းတွေကို သူရရွှေမန်း သားအငယ် ရဲ့ MMIC company နဲ့ အခြားသော အဘတွေရဲ့ လမ်းတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း တွေက ဖောက်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။အဲဒီမိုးကုတ်-ပြင်ဦးလွင်လမ်းတည်ဆောက်ရေး မှာ သူရရွှေမန်းမိသားစုရဲ့ company ဟာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပေါင်းပြီး m ခိုးတာ တွေလုပ်ခဲ့ တာ သိန်းပေါင်း သိန်းချီ မြတ်အစွန်း ရခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူကြီး ကိုလည်း ယူရေနီယံသယ်ဖို့ လမ်းဖောက်လုပ်ပြီးကြောင်းမျက်နှာ လုပ်ပြီး တင်ပြနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။သူရရွှေမန်းရဲ့ တချက်ခုတ်နှစ်ချက် ပြတ် အစီအစဉ်တခု ပေါ့ လေ။
April 27 at 5:43pm ·
မြန်မာ ပြည်မှာ မြန်မာsex ဇာတ်ကားတွေ ပေါ် နေတာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကို ခရမ်းပြာပေါ် လာ မှ ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်အောင်
လိုက်ဖွ နေတယ် ဆိုတော့ အဘနွယ် ၀င်တွေ သတင်းကို သတင်းနဲ့ ဖုံး ဖို့ 
ကြိုးစားနေတယ် ဆိုတာ ပေါ် လွင် ထင်ရှားနေတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ လက်ရှိ အသက် ၁၀ နှစ် ကနေ သေခါနီးအထိ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်က မြန်မာsex ဇာတ် ကားတွေ ကြည့် ဖူးပါတယ်။ မြို့ ကြီးတိုင်းရဲ့ညဈေးတန်း တွေမှာ
ဒီလို ဇာတ် ကားတွေကို ၀ယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ ဦးကို နီ လုပ်ကြံခံရပြီးကတည်းက မြန်မာ ပြည် ရဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ misinformation , disinformation တွေ အ၇မ်း ပြင်းထန်လာတာ က သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ပါ။
လူငယ်တွေ ရဲ့ သတင်း လောကကို စိတ် ၀င်စားလာပြီး အယင်သတင်းတွေကို ဖုံးလွမ်း ဖို့ လုပ်ဆောင်ရာမှာ အကောင်းဆုံးက စစ်ရေးသတင်းနဲ့ sex သတင်းတွေ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဘလက်ဝေခံ မဘသတွေကတော့ လူကြီးနဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေအတွက်အယင်သတင်းတွေကို ဖုံးလွမ်း ဖို့ အတွက် ဘာသာရေး သတင်းဖန်တီးမှု တွေ အသုံးပြု ပါတယ်။ ဒီ လို ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ မြန်မာ့အွန်လိုင်း မီဒီယာ လောကို disinfromationလုပ်နေတာထိုက်သင့် သလောက် အောင်မြင်နေပါတယ်။
ဦးကိုနီကိုလုပ်ကြံတဲ့ သတင်းတောင် တော် တော် ဖော်ပြရေးသားလာ
ကြတာနည်းသွားပါတယ်။ သေချာတာက မြန်မာ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာ လောကနောက်ကွယ်မှာ စစ်ကျော ထောက်နောက်ခံ အုပ်စု တခု သီးသန့် တည်ရှိနေတယ် ဆိုတာ ပါဘဲ ။ လက်ရှိ နိုင်ငံတကာမှာလည်း နိုင်ငံရေး၊ လူမှု ရေးစီးပွားရေး၊ စစ်ရေးတွေမျာ မီဒီယာ ၀ါဒ ဖြန့် ဖန်တီး မှု တွေ ဟာ အရမ်းထိရောက်အောင်မြင် နေတာကို တွေ့ ရှိ နေရပါတယ်။ အွန်လိုင်းမီဒီယာကြောင့် အချို့ သော နိုင်ငံရေးပြိုင်ပွဲ တွေ၊ စီးပွားရေး ယှဉ်ပြိုင် မှု တွေ၊ စစ်ရေး အာရုံလွဲ မှုတွေ မှာ အနိုင်အရှုံး တွေ ထင်ရှားစွာ ဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ အချိန်မှာ ဒီမိုဖက်က သတင်း တန်ပြန် ဖော်ပြရေးတွေ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
April 27 at 5:23pm ·
#သူရရွှေမန်းအုပ်စုရဲ့ လွမ်းမိုးမှုမခံဘဲကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက် တွေနဲ့ အမာခံရပ်တည် ခဲ့ တဲ့ NLD ပါတီ ရဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင် ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံလိုက်ရတယ်။
# သူရရွှေမန်း အုပ်စု က တရားစွဲ ဖို့ လုပ်ပြီး ပြန်နောက်ဆုတ်သွားတဲ့ သူရိ
ယ နေ၀န်းဂျာနယ် ရဲ့ အဆက်နွယ် တယောက် လူမှု ရေး ပြသနာနဲ့ အသတ် ခံလိုက်ရတယ်။
#သူရရွှေမန်း က တစ်ပူး သန်းထွဋ်အောင် ၆၆ ဃ နဲ့ အဖမ်းခံရ မှ ဒီပုဒ်မကြီးကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစာလာခဲ့ တယ်။
# NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ရွှေမန်း မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး အင်ပါယာ ပိုမို
#မြန်မာ ပြည်ကို လာသမျှ တရုတ် အာဏာပိုင် တွေဟာ သူရရွှေမန်းကို လူ
သိထင်ရှားသော်လည်းကောင်း ၊ တိတ်တဆိတ် သော်လည်းကောင်း တွေ့ 
ဆုံ ပြီးမှသာ တရုတ်ပြည်ကို ပြန်သွားကြလေ့ရှိတယ်။
#မြောက်ကိုရီးယား က လက်ရှိ မြန်မာ ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ပညာရှင်တွေအသီး
သီးဟာ သူရရွှေမန်းနဲ့ မကြာခဏ တိတ်တဆိတ် တွေ့ ဆုံကြလေ့ ရှိနေတယ်
# မြန်မာ ပြည်ရှိ သတင်းဂျာနယ်မီဒီယာ အသီးသီး ဟာ တခြားအဘတွေ ရဲ့ 
မသမာ မှု တွေ ကို ကြတော့ ဖော် ထုတ် ရေးသားကြပြီး သူရရွှေမန်း မိသား
စုရဲ့ မသမာ မှု တွေကို ဖော်ထုတ် မရေးသားကြတာ က စဉ်းစားစရာ ။
#သူရရွှေမန်းဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးကနေ အထုတ်ခံရတယ် လို့ တာ ဆိုတယ် သူ့ မိ
သားစု စီးပွားရေးတွေက လက်ရှိ အချိန်အထိ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ရဲ့ စီးပွားရေး
တွေ နဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းနေကြတုန်းဖြစ်တယ်။
The Ministry of Cultural and Religious Affairs has instructed to restrict religious teaching of other religions especially Islam and Christian
Myanmar Capital Nay Pyi Taw is going to shift back to Yangon and I am the only one predicted rightly in 2009 comparing with abandoned old Indian Capital Fatehpur Sikri
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖွနေတဲ့ Eleven Media Group ဟာ ပြဿနာတွေ ကြီးထွားအောင် ဖန်တီးလှုံ့ ဆော်နေတာမို့မရိုးသားပါ
drkokogyi on Myanmar Capital Nay Pyi Taw is…
drkokogyi on ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖွနေတဲ့…
Sandhi Khan Mosque built in 1433 A.D at Mintayabyin, Mrauk-U by Muslim army who came to help enthrone Narameikhla ( The founder of Mrauk-U dynasty)
မိုင်ယသ် လိုက်ပို့သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက် အမြင်
မန်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ ဦးဇော်မြင့်မောင် က ဇာတိမာန် သီချင်းကို ခေတ်နှင့်မညီတော့သဖြင့် မဆိုတော့ သင့်ကြောင်း ထည့်ပြော
စစ် ကျွန် ဒိုင် အာ ခီ ဥ ပ ဒေ